About Us - DongGuan Amoni Hardware Co., Ltd
L0 Vape bhiro
Rosin King ndiyo umambo rosin wokudhinda wakachenjera uye mugadziri. Zviri fekitari, ndiko kambani, ndiko trustable mbanje dzokubudisa maturusi uye muchina nokutengesa.
Rosin King ruzivo rakaumbwa muna 2015, izvozvo kugadzira uye pave hydraulic, pneumatic uye yemagetsi rosin chewaini, kuti Rosin Mambo vakapiswa enail Kits, rosin mabhegi, Pid Controller uye Cartridge Heaters.
At Rosin King Products, tinoshanda nesimba kuti zvakanakisisa solventless dzokubudisa midziyo vatengi vedu. We ape dzidzo vanhu munyika yose kuburikidza solventless ruzivo zviitiko zvedu, kuburikidza chikwata chedu solventless nyanzvi, uye Website yedu rosin -kings .com.
Basa redu kuparadzira solventless dzokubudisa yose nokuiunzira kutengesa zvakanakisisa mukirasi zvinhu kana uchida rosin wokudhinda pamusha kana muri kutarisa yedu zvokutenga giredhi zvigadzirwa, tine zvokushandisa uye unyanzvi kuti kubudirira pazvinangwa zvenyu.
Address: Warehouse, Los Angeles Warehouse, + 3731B San Gabriel River Park nzira, Pico Rivera, CA 90660, USA
6061 Aluminum 3Mugore X 5in Rosin Plates Set ...